Otu esi ehichapụ mkparịta ụka Google Talk na Hangouts na Gmail | Gam akporosis
Google Hangouts na ọrụ Google Talk bụzi ihe mgbe ochie, ma ụlọ ọrụ Mountain View na-ahapụkarị mkparịta ụka anyị na igwe ojii. Agbanyeghị na ọ nwere ike iju gị anya, enwere ike ịnweta ya niile ọbụlagodi na ọrụ ahụ anaghị arụ ọrụ ugbu a ma dochie ya.
Ihe kachasị mma n'ụdị ikpe a bụ ihichapụ akụkọ ihe mere eme niile, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịhapụ ụdị ozi ọ bụla na igwe ojii. You nwere ike ihichapụ ederede na onyonyo ọ bụla site na ọrụ abụọ a ga-echeta ndị jiri ya ogologo oge, ọkachasị Hangouts.
Kọwaa Hangouts na Kọọ akụkọ ihe mere eme
Ma Google Hangouts dị ka Google Talk kwere na ụbọchị ikpeazụ ka ihichapụ ozi ahụ tupu ọrụ ya akwụsị, mana ọtụtụ ndị ọrụ enweghị nlezianya banyere ya. Taa ọ ga - ekwe omume ịme ya na Gmail, onye ahịa na - enye ohere ịme ya n'ụzọ dị mfe.
Ihichapụ mkparịta ụka Google Talk na Hangouts na Gmail ị ga-eme ya site na desktọọpụ version, ebe ọ bụ na ngwa nke ngwaọrụ gị adịghị enye nhọrọ. Maka ihe ụfọdụ, Google na-agbakwunye nhọrọ na njikwa nke anyị na-eji oge niile mgbe ị na-ebute adreesị Gmail.com.
Mepee webusaiti nke Gmail na komputa gi
Gaanụ niile gbadaa na pịa na "More" nhọrọ na mgbe ahụ "Chats" nhọrọ ga-egosipụta, pịa ya
Ozugbo egosiri ozi niile gbasara ọrụ abụọ ahụ, họrọ ha niile na igbe dị na elu aka ekpe wee pịa ahịhịa ahịhịa
Ozi ndị a niile ga-aga ahịhịa, yabụ ị ga-agabiga ya iji hichapụ ha kpamkpam, ebe Gmail na-echekwa ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ ha ma ọ bụ weghachite ya n'oge ụfọdụ.
Gaa n'okpuru Mkparịta ụka wee pịa "Mkpofu", họrọ nkata Google Talk na Hangouts niile wee pịa Hichapụ na-adịgide adịgide na njikwa ozi ahụ.
Ozugbo ihichapụ nkata niile site na ọrụ abụọ ahụ, ị ​​ga-enwe ntakịrị ohere na Gmail na ngwa ndị ọzọ na-eji 15 GB, n'etiti ha bụ Google Drive dịka ọmụmaatụ. Ozi niile sitere na mkparịta ụka echekwara kachasị mma iji wepu ya n'igwe ojii ka ị nwee ike ịhapụ ngwa abụọ nwere oghere ha oge ụfọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi ehichapụ mkparịta ụka Google Talk na Hangouts na Gmail